အိပ်ယာပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ကာ လှဲလှောင်းနေတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ပြန်လည်ရှင်းပြပေးခဲ့တဲ့ …ဖွေးဖွေး – သုတရသ
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဖွေးစိန်လို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးကတော့ အကယ်ဒမီ ၃ ဆု ရရှိထားပြီး အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ။ အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းများကို ရပ်နားထားရတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်များကိုလည်း ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောပြလေ့ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့
မင်းသမီးတဦးဖြစ်ပေမဲ့လည်း သူမရဲ့ စိတ်ခံစားချက်အတိုင်း ပရိတ်သတ်ကို ပြသလေ့ရှိတာကြောင့် ပရိတ်သတ်နဲ့ တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့ မင်းသမီးတဦးလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ စိတ်ခံစားချက်အတိုင်း သဘာဝဆန်ဆန် သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဝေဖန်ပြောဆိုနေသူတွေကို အခုလိုပဲ တုန့်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဖွေးဖွေး ပြောခဲ့တာကတော့ ”
တသက်လုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်ကျွေးလာတဲ့ မိန်းကလေး တယောက် စိတ် အတွေးလေး နဲ့ ပင်ပန်းလို့ ခဏ လှဲအိပ်မိတာ မှာ ဘာ တွေ တွေးနေကြတာလဲရှင်….?တကယ် ကြေကွဲနေတဲ့ချိန်မျိုးဆို ဒီထက်ဆိုးပါတယ်..အမှန် ကို ကိုယ့်ကိုယ်လဲမြင်ကြပါရှင်…This is Art..” ဆိုကာ ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ယာထဲမှာ ပက်လက်လှန်ကာ လှဲလှောင်းနေတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး
အတွေးတွေ မလွန်စေဖို့နဲ့ အဆိုပါ ဓာတ်ပုံဟာ အနုပညာတခုသာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဖွေးစိန်လို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးကတော့ အကယ်ဒမီ ၃ ဆု ရရှိထားပြီး အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေသူပါ။
အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းများကို ရပ်နားထားရတာကြောင့် စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်များကိုလည်း ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောပြလေ့ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့ မင်းသမီးတဦးဖြစ်ပေမဲ့လည်း သူမရဲ့ စိတ်ခံစားချက်အတိုင်း ပရိတ်သတ်ကို ပြသလေ့ရှိတာကြောင့် ပရိတ်သတ်နဲ့ တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့ မင်းသမီးတဦးလို့လည်း ဆိုရမှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့
သူမရဲ့ စိတ်ခံစားချက်အတိုင်း သဘာဝဆန်ဆန် သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဝေဖန်ပြောဆိုနေသူတွေကို အခုလိုပဲ တုန့်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဖွေးဖွေး ပြောခဲ့တာကတော့ ” တသက်လုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်ကျွေးလာတဲ့ မိန်းကလေး တယောက် စိတ် အတွေးလေး နဲ့ ပင်ပန်းလို့ ခဏ လှဲအိပ်မိတာ မှာ ဘာ တွေ တွေးနေကြတာလဲရှင်….?တကယ် ကြေကွဲနေတဲ့ချိန်မျိုးဆို
ဒီထက်ဆိုးပါတယ်..အမှန် ကို ကိုယ့်ကိုယ်လဲမြင်ကြပါရှင်…This is Art..” ဆိုကာ ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ယာထဲမှာ ပက်လက်လှန်ကာ လှဲလှောင်းနေတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အတွေးတွေ မလွန်စေဖို့နဲ့ အဆိုပါ ဓာတ်ပုံဟာ အနုပညာတခုသာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ရှင်းပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
နိုငျငံကြျော မငျးသမီးတဦးဖွဈတဲ့ ဖှေးစိနျလို့ အားလုံးက ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါကွတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး ဖှေးဖှေးကတော့ အကယျဒမီ ၃ ဆု ရရှိထားပွီး အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးတဦးအဖွဈ ရပျတညျနသေူပါ။ အခုလို ကိုဗဈကာလမှာတော့ အနုပညာလုပျငနျးမြားကို ရပျနားထားရတာကွောငျ့ စိတျညဈနတေဲ့အခြိနျမြားကိုလညျး ပရိတျသတျတှကေို ပွောပွလရှေိ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဖှေးဖှေးကတော့ မငျးသမီးတဦးဖွဈပမေဲ့လညျး သူမရဲ့ စိတျခံစားခကျြအတိုငျး ပရိတျသတျကို
ပွသလရှေိ့တာကွောငျ့ ပရိတျသတျနဲ့ တသားတညျးဖွဈနတေဲ့ မငျးသမီးတဦးလို့လညျး ဆိုရမှာပါ။ လကျရှိမှာတော့ သူမရဲ့ စိတျခံစားခကျြအတိုငျး သဘာဝဆနျဆနျ သရုပျဖျောထားတဲ့ ဓာတျပုံတှကေို ဝဖေနျပွောဆိုနသေူတှကေို အခုလိုပဲ တုနျ့ပွနျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဖှေးဖှေး ပွောခဲ့တာကတော့ ” တသကျလုံး ကိုယျ့ကိုယျကို လုပျကြှေးလာတဲ့ မိနျးကလေး တယောကျ စိတျ အတှေးလေး နဲ့ ပငျပနျးလို့ ခဏ လှဲအိပျမိတာ မှာ ဘာ တှေ တှေးနကွေတာလဲရှငျ….?တကယျ
ကွကှေဲနတေဲ့ခြိနျမြိုးဆို ဒီထကျဆိုးပါတယျ..အမှနျ ကို ကိုယျ့ကိုယျလဲမွငျကွပါရှငျ…This is Art..” ဆိုကာ ပွောဆိုခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အိပျယာထဲမှာ ပကျလကျလှနျကာ လှဲလှောငျးနတေဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပျနဲ့ ပကျသကျပွီး အတှေးတှေ မလှနျစဖေို့နဲ့ အဆိုပါ ဓာတျပုံဟာ အနုပညာတခုသာ ဖွဈတဲ့အကွောငျးကို ရှငျးပွခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျရှငျ။ နိုငျငံကြျော မငျးသမီးတဦးဖွဈတဲ့ ဖှေးစိနျလို့ အားလုံးက
ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါကွတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး ဖှေးဖှေးကတော့ အကယျဒမီ ၃ ဆု ရရှိထားပွီး အောငျမွငျတဲ့ မငျးသမီးတဦးအဖွဈ ရပျတညျနသေူပါ။ အခုလို ကိုဗဈကာလမှာတော့ အနုပညာလုပျငနျးမြားကို ရပျနားထားရတာကွောငျ့ စိတျညဈနတေဲ့အခြိနျမြားကိုလညျး ပရိတျသတျတှကေို ပွောပွလရှေိ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဖှေးဖှေးကတော့ မငျးသမီးတဦးဖွဈပမေဲ့လညျး သူမရဲ့ စိတျခံစားခကျြအတိုငျး ပရိတျသတျကို ပွသလရှေိ့တာကွောငျ့ ပရိတျသတျနဲ့ တသားတညျးဖွဈနတေဲ့
မငျးသမီးတဦးလို့လညျး ဆိုရမှာပါ။ လကျရှိမှာတော့ သူမရဲ့ စိတျခံစားခကျြအတိုငျး သဘာဝဆနျဆနျ သရုပျဖျောထားတဲ့ ဓာတျပုံတှကေို ဝဖေနျပွောဆိုနသေူတှကေို အခုလိုပဲ တုနျ့ပွနျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဖှေးဖှေး ပွောခဲ့တာကတော့ ” တသကျလုံး ကိုယျ့ကိုယျကို လုပျကြှေးလာတဲ့ မိနျးကလေး တယောကျ စိတျ အတှေးလေး နဲ့ ပငျပနျးလို့ ခဏ လှဲအိပျမိတာ မှာ ဘာ တှေ တှေးနကွေတာလဲရှငျ….?တကယျ ကွကှေဲနတေဲ့ခြိနျမြိုးဆို ဒီထကျဆိုးပါတယျ..အမှနျ ကို
ကိုယျ့ကိုယျလဲမွငျကွပါရှငျ…This is Art..” ဆိုကာ ပွောဆိုခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အိပျယာထဲမှာ ပကျလကျလှနျကာ လှဲလှောငျးနတေဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပျနဲ့ ပကျသကျပွီး အတှေးတှေ မလှနျစဖေို့နဲ့ အဆိုပါ ဓာတျပုံဟာ အနုပညာတခုသာ ဖွဈတဲ့အကွောငျးကို ရှငျးပွခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျရှငျ။